Ithegi: landela emva koko
NgoLwesithathu, Matshi 25, 2015 NgoMvulo, Aprili 25, 2016 Douglas Karr
Ndiyakuthanda ukwabelana ngezixhobo ezithile zemveliso endizisebenzisayo ukulawula ukungena okukhulu kwe-imeyile. Kunyaka odlulileyo, ndacebisa (kwaye ndisasebenzisa) i-Evercontact ehlalutya iisiginitsha ze-imeyile ukuhlaziya iinkcukacha zonxibelelwano. Phantse kwiminyaka emibini eyadlulayo, ndabelana nge-Unroll.me- inkqubo endisayisebenzisayo eqokelela kunye nokudibanisa ii-imeyile kwi-imeyile enye ukunciphisa ingxolo. Namhlanje, ndabelana nge-FollowUpThen. Nanku umzekelo obalaseleyo wendlela endiyisebenzisa ngayo. Siyasebenza